Kitaaba hawwataafi dandeettii Afaan barachuu daa'immanii - BBC News Afaan Oromoo
Kitaaba ijoollee Afaan Oromoon
Namni tokko Afaan isaatiin yaadee, Afaan isaatiin dubbifatee, Afaan isaatiin osoo barreessee waan tokko sirriitti hubachuu danda'a jetti kitaaba ijoolleen salphaatti Afaan Oromoo akka baratan gargaaru kan qopheessite Galaanee Tafarraa Dureessaa.
Godina Jimmaa, magaalaa Limmuutti kan dhalatte Galaanee Tarrafaa Dureessaa, kitaaba Afaan Oromoo Dungoo jedhamu halluuwwaniifi fakkiiwwaan gara garaan miidhage qopheessitee barattootaaf dhiyeessiti.
"Kitaabota Afaan Ingiliziin ijoollotaaf barraa'an gaafan argu, bay'ee bareedaa, halluun isaas miidhagoodha afaan sana baruuf kan nama hawwatudha."
"Ijoolleen ammoo waan babbareedu jaalatti, kitaabichi baay'ee kan isaan hawwatu ta'een argadhe" jetti.
Waanta kana Afaan Oromoon osoo qopheessinee ijoolleen jaallatanii afaanicha barachuu danda'u yaadni jedhu na keessa bule jechuun BBC'tti himteetti.
Bakka itti dhalatte irraa daa'imummaan gara Finfinnee kan dhufte Galaaneen ofiif carraa Afaan Oromoo barachuu hin arganne.
Hanga kutaa 3 qofatti Afaan Oromoon kan baratteefi erga gara Finfinnee imaltee booda Afaan Amaaraan kan itti fufte Galaaneen, "Afaan Oromoo barreessuus ta'e dubbisuu guutummaan guutuutti irraanfadhen ture" jetti.
"Ergan barumsa sadarkaa lammataa eegalee booda deebi'een ofiin of barsiisuu eegale," jetti.
Kunis akka Oromoo tokkootti Afaan Oromoo baruu, ittiin barreessuufi dubbisuuf fedhii qabdu irraa kan ka'e ta'uu dubbatti.
"Baradhee fixeera jedhee hin amanu, hamma ta'e of barsiiseera. hammuman bare kana ammoo akkuma koo osoo baruu barbaadanii warra carraa hin arganneef osoon qoode," yaada jedhuun kitaaba ijoollee qopheessuu eegaluu ishii himti.
Keessattuu maatiin ijoolleen isaanii magaalota gurguddoo keessatti dhalatan akkamiin bifa hawwataa ta'een ijoollee isaanii afaan barsiifatuu danda'u kan jedhu qophii kitaaba Dungoof ka'umsa ta'uu himti.
Fedhiidhuma dhuunfaa isheerraa ka'uun hojii kana eegaluu kan dubbattu Galaaneen, hayyoonniifi ogeeyyiin afaanii caalaatti dhimmicha irratti beekumsa qaban waan kanarratti osoo hojjetanii gaariidha jetti.
'Riqichi uumamaa Hulluuqaa yaaddoo keessa jira'